काठमाडौंमा बसले स्कुटरलाइ ठक्कर दिंदा कृतिकाको मृत्यु ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
काठमाडौंमा बसले स्कुटरलाइ ठक्कर दिंदा कृतिकाको मृत्यु !
बसको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा दोलखाकी २५ वर्षीया कृतिका कार्की रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
कृतिकाको विवाह गर्ने कुरा पनि चलिरहेको थियो। तर त्यसैबीच यस्तो घटना भएको उनले बताइन्। कृतिका पढाइमा पनि सानैदेखि अब्बल भएको उनी बताउँछिन्।जमुनाले भनिन्, ‘पढाइमा पनि ट्यालेन्ट, त्यसमा मात्र होइन हरेक कुरामा। कसैलाई पनि नराम्रो नगर्ने सिद्धान्त थियो उनमा। उसको जति भावना कसैको छैन होला।